BP Tomato Body Serum - EasyAds Myanmar
စျေးနှုန်း : 8,000 Kyat (Fixed)
🍅BP Tomato Serum🍅
➡BP Serum ဆိုတာ ဘာလဲ?🤔
✔လူကြိုက်အရမ်းများပြီး Thai မှာ အရမ်း ပေါက်နေတဲ့ BP Serum.
✔အရမ်းတန် အရမ်းသုံးကောင်းတာမို့ Thai Blogger တွေ reviews ပေးထားပြီး တော်တော် hot နေတဲ့ Body Serum.
➡BP Serum ကို ဘာကြောင့် သုံးကြတာလဲ ဆိုရင်…..
🍅ခရမ်းချဉ်သီးက အသားအရေလှစေတယ်ဆိုတာ သိကြတယ် မဟုတ်လား? အဲ့လို အသားအရည် လှစေတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး အဆီအနှစ်တွေ ကနေ အဓိကထုတ် လုပ်ထားတာမို့ အသားရည် ဖြူပြီး ကြည်စေပါတယ်။
🍅အသားဖြူ မြန်တဲ့အပြင်အမဲစက်၊ အမာရွတ် တွေပါ ပျောက်ကင်းစေတယ်။ အကြောပြတ်ရာတွေ သက်သာမယ်။
🍅အသားအရေ စိုပြည်ပြီး Bright ဖြစ်လာစေမယ်။
🍅Serum Type မလို့ အသားထဲ စိမ့်ဝင်လွယ်တယ်။
🍅500 ml တောင်ပါလို့ အကြာကြီး အသုံးခံပြီး ဈေးလည်းတန်ပါတယ်။
➡အခုလို နွေရာသီမှာ Gel type ဖြစ်တဲ့ BP Serum လို lotion တွေပဲ လိမ်းနိုင်တော့တယ်။ လိမ်းလိုက်ရင်လဲ အေးအေးလေးနဲ့ lightweight ဖြစ်တယ်။
➡BP ကုမ္ဗဏီက ထုတ်တာဆိုတော့ နာမည်ကြီးပြီးသား၊ ဈေးလည်းအမြဲတန်တယ်။ လုံးဝကို Glow Skin ရပီး ဖြူကြည်လာမှာနော်။
🍅သူတစ်ခုတည်း လိမ်းရင်လည်း ရပေမယ့် ပိုပြီးတော့ သိသာတဲ့ အကျိုးရလာဒ်ကို ရချင်ရင် နှစ်သက်ရာ Lotion တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲလိမ်းရင် ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက Serum Type လေး ဆိုတော့ အတူ တွဲလိမ်းတဲ့ Lotion ရဲ့ အာနိသင်ကို ပိုပြီး မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာ မလို့ မင်မင်ကတော့ Lotion or Cream တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲလိမ်းပေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မင်မင်ဆီက AR Vitamin E Cream လေးနဲ့လည်း တွဲလိမ်းလို့ ရတယ်နော်။😊
Price – 8,000 kyats
➡ကဲ….မျက်နှာချည်းပဲ Skin Care ပြီး Body ကို ပစ်မထားကြပါနဲ့နော်။ မင်မင်ဆီကနေ အမြန်သာ BP Tomato Serum ကို ဝယ်ယူဖို့ အမြန် လာ Hi လိုက်ကြပါတော့။
💜အသားဖြူချင်တဲ့ သူများ အတွက် မင်မင် အကြံလေးပေးချင်တာက……
✔အပြင်ထွက်ရင် လက်ရှည် အမြဲတမ်း ဝတ်ပါ။ Suncream လိမ်းထားလည်း ဝတ်ပါနော်။
✔ရေချိုးပြီးလို့ ရေသုတ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ Lotion လိမ်းတာက ပိုထိရောက်စေပါတယ်။
✔ပြီးတော့ Lotion လိမ်းရင် လိုအပ်တဲ့ ပမာဏတော့ လုံလောက်အောင် လိမ်းရပါတယ်။ ချွေတာနေရင် အလုပ် မဖြစ်ပါဘူးနော်။💜
#BPSerum 🍅BP Tomato Serum🍅 ➡BP Serum ဆိုတာ ဘာလဲ?🤔 ✔လူကြိုက်အရမ်းများပြီး Thai မှာ အရမ်း ပေါက်နေတဲ့ BP Serum. ✔အရမ်းတန် အရမ်းသုံးကောင်းတာမို့ Thai Blogger တွေ reviews ပေးထားပြီး တော်တော် hot နေတဲ့ Body Serum. ➡BP Serum ကို ဘာကြောင့် သုံးကြတာလဲ ဆိုရင်…...